Warshad Laser optics - Soosaarayaasha laser laser optic, shiinaha
Optics-ka aan bixinayno ayaa daboolaya laser optics; laambad toosh ah; kala-soocida optics-ka iyo ka shaqeynta qalabka infrared. Oo ay ku jiraan daaqadaha, muraayadaha indhaha, Guud ahaan, optics-keena waxaa lagu keenaa ama aan la dhigin sida macaamiisha codsadaan.
Muraayadda 'Plano-concave lens' waa sheyga ugu caansan ee loo isticmaalo saadaalinta iftiinka iyo ballaarinta dogobka. Dahaarka leh daaha kahortaga, muraayadaha indhaha waxaa loo adeegsadaa nidaamyo kala duwan oo indhaha ah, leysarka iyo shirarka.
DIEN TECH waxay siisaa heer tayo sare leh iyo miirayaal fara-gelinta faro-gelinta faro-gelinta ah oo dhex-dhexaad u ah 200 nm illaa 2300 nm.
Guud ahaan, laambadda Xenon waxay u baahan tahay inay ku xirto tuubada quraaradda quartz ee labada koronto si ay u keydiso tamarta korontada, ka dib markii tuubada faakuumka sare ay ka buuxdo daaweynta gaaska xenon, si ay u soo saarto garaaca wadnaha ee garaaca iftiinka gaaska. Xenon Lamp si ballaaran ayaa loogu adeegsaday mashiinka xardho laser, mashiinka alxanka laser, mashiinka qodista laser, mashiinka quruxda laser. Waxaan soo saareynaa Xenon Lamp xulashada tayada UV quartz filterka tayada sida qalabka tuubada ee cufnaanta tayo sare leh thorium tungsten, barium, cerium tungsten elektrode tungsten ama korantada xenon, oo leh awood xamuul, tayo sare leh bamka leer laser, nolol dheer iyo astaamo kale .